प्याजको मूल्य आकाशियो, कति छ प्रति केजी ? हेर्नुस – Rapti Khabar
३१ भदौ, काठमाडौं । भारतले प्याज निर्यात बन्द गरेपछि बजार भाउमा नेपाली व्यापारीको मनोमानी सुरु भएको छ ।
कालीमाटी तरकारी बजारमा करिब २४ घण्टाको फरकमै प्याजको भाउमा शतप्रतिशतभन्दा बढीले मूल्य बढाइएको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन् ।
बजारमा प्याज पाइनै छोड्यो : व्यापारी
भारतले प्याज निर्यात रोकेपछि नेपाली बजारमा प्याज पाइन छोडेको कालीमाटीका व्यापारीहरुको तर्क छ । भारतबाट आउन छोडेपछि बजारमा प्याजको अभाव भएको कालीमाटीका आलु–प्याज व्यापारी दधिराम उप्रेतीको दाबी छ । ‘हिजोबाट प्याज आउन छोड्यो, बजारमा प्याज पाइएको छैन,’ उप्रेतीले भने । मागको तुलनामा बजारमा अभाव भएपछि केही व्यापारीले महँगोमा प्याज बिक्री गरेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
दशैँसम्म प्याजको मूल्यले नयाँ रेकर्ड राख्न सक्छ’
आसन्न दशैँ–तिहारमा प्याजको अभाव हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ । प्रमुखः निर्यातकर्ता भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै नेपाली बजारमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न थालिसकेको छ ।
आज २०७७ भदौ ९ गते मंगलबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ- मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्नेछ । धर्म तथा अध्यात्मतिर ध्यान जाने हुँनाले शरिरले […]